Home News Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay yeesheen uga dooday arrimo xasaasi...
Hindise sharciyeedkan ayaa soo maray heerar kala duwan sida aqrinta 1-aad, aqrinta 2-aad, iyo aqrinta 3-aad.
Inta uu maraayay heerarkaas ayaa xildhibaanada waxay ku dareen talooyinkooda iyo soo jeedino la xiriira meelaha in laga bedelo u baahan xeerkan.
Kulanka oo ay soo xaadireen 141 xildhibaan ayaa waxaa shir guddoominaayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka mid ah guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee Golaha Shacabka ayaa sharaxaad ka bixiyay heerarka kala duwan ee uu soo maray hindise sharciyeedkan.
Sidoo kale waxa uu ka warbixiyay muhiimada uu xeerkan leeyahay iyo sida ay guddigooda ugu soo shaqeeyeen bilihii u dambeeyay.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xeray ayaa sheegay in maalinta sabtida cod loo qaadayo hindise sharciyeedkan.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaan walbo uu fursad u heysto inuu talooyinkiisa uu ku biiriyo.
“Codeynta sharcigaan waxa ay dhaceysaa maalinta Sabtida xildhibaan walba waxa laga codsanaya inuu isku soo diyaariyo maadaama maanta aysan fadhin kooramkii lagu codeyn lahaa, xildhibaankii doonaya inuu wax ku daro fursad ayuu heystaa”. ayuu yiri guddoomiye Mahad.
Previous articleDowladda Federaalka oo khilaaf ba’an ka dhex abuurtay doorashada KG
Next articleDowladda Mareykanka oo kordhisay duqeymaha ay la beegsaneyso Saldhigyada Ururka Al Shabaab
Maxay tahay Sababta uu u Baaqday Shirkii Golaha Amniga Qaranka Ee...